BLESSING PO WAH FAMILY
WELCOME TO BLESSING POWAH FAMILY
မြန်မာစစ်တပ် ခလရ ၅၈ မှ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကချင်ကျောင်းဆရာမှ Mangshang Ying Wang အား ဖားကန့်လမ်း ကားမိုင်းတွင် မြေမြှပ် သဂြိုလ်နေပုံ။
ကချင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက် ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ကိုယ်ဝန်နှင့်ကျောင်းဆရာမတဦးသည် မြန်မာအစိုးရစစ်ကြောင်း၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကားမိုင်ဆေးရုံတွင် သေဆုံးသွားကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိသူ အသက်၂၂ အရွယ်ခန့်ဆရာမ မန်ရှန် ယိန်းဝမ် (Mangshang Ying Wang)နှင့် ယောက်မဖြစ်သူ ဂေါ့လူ ဆိုင်းခေါန် (Gawlu Seng Hkawn) တို့သည် ဖားကန့်လမ်းပိုင်း နမ်ယာ (Nam Ya) နှင့် ကပ်မှော် (Kapmaw) ကြား ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်နံနက် ၉ နာရီတွင် မြန်မာအစိုးရစစ်ကြောင်းတခု နှင့် ဆုံတွေ့စဉ် ထိုစစ်ကြောင်းမှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိသွားသည်။
ထိုနေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင်လည်ပင်းအရင်းတွင် ရရှိသောဒဏ်ရာကြောင့် ကိုယ်ဝန် ၄ လနှင့် ဆရာမ ယိန်းဝမ် သေဆုံးသွားသည်။
ယောက်မဖြစ်သူမှာ လည်းပင်းနှင့် ပခုံးစပ်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာတခု အပြင်ဘယ်ဘက်ပေါင်နောက်ဘက်ပိုင်း တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာတခု သာရရှိပြီး အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
၎င်းတို့သည် ကားမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ ကပ်မှော်ဇုံနယ် ဆိုင်းဖရာ (Seng Hpra mare) ကျေးရွာမှဖြစ်ကာ ဆရာမမှာ ထိုကပ်မှော်ဇုံနယ်ရှိ ခွမ်စိုင်ဇွမ် (Hkumtsai Zup mare) ကျေးရွာမှ ကျောင်းဆရာမတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်သည်။
ပစ်ခတ်သွားကြသည့် မြန်မာအစိုးရတပ်မှာ ဗိုလ်မှူး ရဲမင်းသွေး၊ ဗိုလ်မှူး ကိုကိုလတ်၊ ဗိုလ်ကြီး ထွန်းနိုင်တို့ ဦးစီးသော မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ)အောက် ဝိုင်းမော်နယ်မြေခံ ခလရ အမှတ်(၅၈) မှ ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများပြောသည်။
Posted by blessing73 at 20:05 No comments:
Malaysia Karen New Year , traditional dances
Posted by blessing73 at 22:17 No comments:
All visitor are thanks
Posted by blessing73 at 04:19 No comments:
Posted by blessing73 at 19:23 No comments:
အလွမ်းနေ့ရက်ရှည်.Ringo & May Sabae Nyo
Posted by blessing73 at 00:11 No comments:
အရက်အဆိပ်ဖြစ်၍ အိန္ဒိယ တောင်ပိုင်းတွင် လူ များစွာသေဆုံး
အိန္ဒိယမှ ဆရာဝန်များ West Bangal မှ အရက်ဆိပ်သင့်သူများကို ကြိုးစားကယ်တင်နေရတဲ့အကြောင်း ယနေ့ ကမ္ဘာ့သတင်းတစ်ခုနဲ့
အထက်ပါ West Banga lအရပ်မှအရက်ဆိပ်သင့်သူများပျားစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့မှ စ၍ လူ 169 ဦးတိတိသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ။
ထို့အပြင် 195 ဦးတိတိ် ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု့ခံယူနေကြရပြီး ထိုသူများအားလုံး အပြင်းဖျားနေတယ်လို့သတင်းေ ထာက်က တင်ပြထားပါတယ် ။
တောင်ပိုင်းပါဂနတ်စ် ခရိုင် ရှိ ရွာပေါင်း 12 ရွာမှာရှိတဲ့ ရွာသားများ အထက်ပါ အရက်အဆိပ်သင့်မှု့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ ညနေမှ အရက်သောက်အပြီး အဆိပ်သင့်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ထို့အတွက် တာဝန်အရှိဆုံး တရားခံ 13 ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီးပြီလို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားပါတယ် ။
သက်ဆိုင်ရာ အရာရှိများရဲ့ ရှင်းပြချက်ထဲမှာ ထိုလူနားများထဲမှ အဆိပ်သင့်သူ 20 ကျော်မှာ Antifreeze Methanol ဓာတုဗေဒ အဆိပ်များတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ် ။
BBC မှသတင်းထောက်ကတော့ ဆေးရုံရှိ လူနားများမှာ အများဆုံးဆင်းရဲသူများဖြစ်ပြီး ဆေးရုံရှိ ဆေးဝါးမလောက်ငှမှုကြောင့် အပြင်မှာဆေးဝါးဝယ်ယူနေရတဲ့အတွက် ညည်းတွားဝေဖန်နေကြတယ်လို့ သတင်းတင်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ် ။
နိုင်ငံတကာအင်တာနက်စာမျက်နှာက ဝေဖန်သံများအနေနဲ့ အထက်ပါသတင်းအပေါ် ဘာကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ များပျားတဲ့ အရက်ဆိပ်သင့်မှု့တွေဖြစ်နေရသလဲဆိုတာကို အံသြ နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့ အကြောင်း ယနေ့ ခေါင်းကြီးသတင်းတစ်ခုအဖြစ် ဧဒင်အဖွဲ့သားများကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ ။
Ref : CNN ( Cable News Network )
BBC Android news !
India doctors fight to save West Bengal alcohol victims
Dozens of people are still critically ill in hospital
Doctors in India's West Bengal state are battling to save the remaining victims of toxic alcohol poisoning that has now killed 169 people.
A total of 195 people are still being treated in hospital, most of them critically ill.
Residents of 12 villages in the South 24 Parganas district fell ill after drinking the alcohol on Tuesday night. Thirteen people have been arrested.
Officials said the antifreeze methanol had been found in at least 20 victims.
The BBC's Amitabha Bhattasali in Calcutta says there isashortage of medicine in hospitals and many patients complained they were being asked to buy medicine from outside.
Most victims are poor villagers who are unable to afford it.
Posted by blessing73 at 05:55 No comments:
Welcome to blessingpowah blog
Welcome to blessingpowah
thank for every one to visit my blog and every body can give me some suggestion
Haven poem (1)
karen newyear song (1)
Miss home (1)
My clever cat (1)
Myanmar daily (1)
myanmar foot ball (1)
The small car will emerge soon (1)
some thing that you have to note
when u make people happy ,one day u will get happy when u make people sad one day you will get back the same thing soon be flexible in you can
Date Singapore Dollar Myanmar Kyat
1st oct 1 dollar 622
2nd Oct 1 dollar 620
3rd 1 dollar 620
4th 1 620
30oct 1 630
23Nov 1SGD 611
photo of cube
(Karen new year song)
ဧရာမမြွေကြီးတစ်ကောင် သတ်ဖြတ်ပြီးနောက် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်း
ကချင်ပြည်နယ် မလိ-အင်မိုင်ဇွပ် (မြစ်ဆုံ) စီမံကိန်း တွင် ဧရာမမြွေကြီး တစ်ကောင်အား တရုတ်အလုပ် သမားများ သတ်ဖြတ် ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာအစိုးရ သမ္မ...
Good Health ဂျာနယ် အာရောဂျံ မဂ္ဂဇင်း သုတစွယ်စုံ မဂ္ဂဇင်း The Chic မဂ္ဂဇင်း သတင်းများ ပြည်တွင်းသတင်း နိုင်ငံတကာ သတင်း ထူးဆန်းထွေလာ သတင်း ကျန်းမာရေးသတင်း ရုပ်ရှင် သတင်း အားကစား သတင်း ဂီတ သတင်း စာပေ သတင်း စွယ်စုံ မီဒီယာ သတင်း Myanmar Font တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများကို ကျပ်သုံးသိန်းထက် မများဘဲ ၂ဝ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီတွင် စတင်ချထား ပေးနိုင်မည်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းလိုင်း သန်း ၃ဝ စီမံကိန်းတွင် ပထမနှစ် လေးသန်း စီမံကိန်းအဖြစ် တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများကို ကျပ်သုံးသိန်...
ပန်းသေရောဂါ ကုသရန် ငွေအလုံအလောက် မပေးသော ဇနီးကို ဓါးဖြင့် ခုတ်သတ်ခဲ့သည့်ခင်ပွန်းအား ထောင်ဆယ်နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်မြို့နယ်တွင် ပန်းသေရောဂါ ကုသရန် ငွေအလုံအလောက် မပေးသည့် ဇနီးဖြစ်သူကို ဓါးဖြင့် ခုတ်သတ်ခဲ့သည့် ခင်ပွန်းဖြစ...
ဧ၀ရတ်တောင်သွား ခရီးသည်လေယာဉ် ပျက်ကျ၊ ၁၉ ဦးေ
နီပေါနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဧ၀ရတ်တောင်ကြည့်ဖို့ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေ တင်လာတဲ့ လေယာဉ် ပျက်ကျခဲ့တဲ့အတွက် လေယာဉ်ပေါ် ပါလာသူ ၁၉ ယောက်စလုံး သေဆု...
အဝေးထိန်းခလုတ်ဖြင့် လေထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော Video Camera
တရုတ်နိုင်ငံမှ လူတစ်ဦးဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာ ဗီဒီယို ကင်မရာကို အဝေးထ်ိန်းချူပ်မှု့စနစ်ဖြင့် အပေါ်သို့ ပျံတက်နိုင်အောင် တီထွ...
FRIDAY,7OCTOBER 2011 ခင်ပွန်း​အား​ သတ်ဖြတ်စား​သောက်ခဲ့​သည့်​ အမျိုး​သမီး​၏ ​လျှော့​ရက်​လျှောက်ထား​မှုအား​ တရား​ရုံး​ကငြင်း​ဆန် ခင်ပွန်းြ...
ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးကားတစ်မျိူး ထွက်ပေါ်လာဦးမည် Gordon murry design company ကလာမည့်နှစ် အနည်းငယ်အတွင်း ဈေးကွက်အတွင်း စတင်ရောင်းချတော့မည့် T.25 ဟုအမ...
Miss Universe Contest - Top5- 2011
Myanmar Music Video : Eindra Kyaw Zin & Hay Mar Nay Win - LIVE SHOW